Factory Factory PTFE - Mpanamboatra orinasa PTFE Rod, mpamatsy
Polymer- Tora-by Plastika PTFE 15mm
Famaritana: Diamère: 8mm material: 100% kalitao vy noforonina PTFE: fotsy, malama, tsy misy lavaka amin'ny rivotra Gravity manokana: 2.10 ~ 2.30 Herin'ny tensile: 20.0 MPa Ultimate elongation: 150% fanoherana fanoherana taratra fanoherana ambany fanoherana avo fanoherana fanoherana harafesina , lubricative anti-volatilization Hafa hafa: Φ70mm Φ65mm Φ60mm Φ55mm Φ50mm Φ45mm Φ40mm Φ35mm Φ30mm Φ25mm Φ20mm Φ18mm Φ16mm Φ15mm Φ14mm Φ13mm Φ12mm Φ10mm Φ9mm Φ8mm Φ7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm It7mm ny ...
Ny tsorakazo PTFE amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho toy ny tahiram-bary ho an'ny karazan-tsakafo simika, elektrika ary mekanika izay takiana ireo toetra mampiavaka ny PTFE. Misy mpameno isan-karazany azo ovaina ny fananan'ny PTFE hahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana. Famaritana: OD 50mm fitaovana: kalitaon'ny tsorakazo vita amin'ny biriky PTFE: fotsy, malama, tsy misy lavaka rivotra Misintona manokana: 2.10 ~ 2.30 Herin'ny tanjaka: 20.0 MPa Ultimate elongation: 150% fahanterana fanoherana taratra r ...
Ny tsorakazo PTFE amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho toy ny tahiram-bary ho an'ny karazan-tsakafo simika, elektrika ary mekanika izay takiana ireo toetra mampiavaka ny PTFE. Misy mpameno isan-karazany azo ovaina ny fananan'ny PTFE hahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana. Famaritana: OD 3mm fitaovana: kalitaon'ny tsorakazo vita amin'ny biriky PTFE: fotsy, malama, tsy misy lavaka rivotra Misintona manokana: 2.10 ~ 2.30 Herin-tady: 20.0 MPa Farany elongation: 150% fanoherana fanoherana ny fahanterana re ...
Ny tsorakazo PTFE amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho toy ny tahiram-bary ho an'ny karazan-tsakafo simika, elektrika ary mekanika izay takiana ireo toetra mampiavaka ny PTFE. Misy mpameno isan-karazany azo ovaina ny fananan'ny PTFE hahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana. Famaritana: OD 35mm fitaovana: kalitaon'ny tsorakazo vita amin'ny biriky PTFE: fotsy, malama, tsy misy lavaka rivotra Misintona manokana: 2.10 ~ 2.30 Herin-tady: 20.0 MPa Farany elongation: 150% fahanterana fanoherana taratra r ...
Ny tsorakazo PTFE amin'ny ankapobeny dia ampiasaina ho toy ny tahiram-bary ho an'ny karazan-tsakafo simika, elektrika ary mekanika izay takiana ireo toetra mampiavaka ny PTFE. Misy mpameno isan-karazany azo ovaina ny fananan'ny PTFE hahafeno ny fepetra takian'ny fampiharana. Famaritana: OD 8mm fitaovana: kalitaon'ny tsorakazo vita amin'ny biriky PTFE: fotsy, malama, tsy misy lavaka rivotra Misintona manokana: 2.10 ~ 2.30 Herin'ny tanjaka: 20.0 MPa Ultimate elongation: 150% fanoherana fanoherana ny fahanterana re ...
Ny tsorakazo PTFE dia manana loko fotsy fotsy mangatsiaka ary mifanena amin'ny antsipirian'ny Underwriters Laboratories UL 94V0. PTFE (polytetrafluoroethylene) dia manohitra ny ankamaroan'ny akora simika, matetika mahazaka ny mari-pana avo lenta, ary manana faritra ambany ambany izay tsy mifamatotra mora amin'ny fitaovana hafa, manome azy toetra tsy mitongilana. Ity fitaovana ity dia mizara ny fananana mitovy amin'ny fluoropolymera hafa saingy amin'ny ankapobeny mahazaka hafanana ambony kokoa noho ny FEP sy ETFE. 1/4 ″ savaivony Virijina PTFE Rod hafa Siz ...